Adora & etc.: ခရီးသွားကြမယ်
Posted by Adora etc. at 02:08
မဒမ်ကိုး 11 September 2014 at 18:26
ခရီးထွက်ဖို့ကြံလိုက်ဘိုင်ပြတ်လိုက် :P ( ကွန်းမန့်ကတဆင့်ရောက်ခဲ့ပါတယ် )
Adora etc. 15 September 2014 at 18:46
မဒမ်ကိုး >> အတူတူပါပဲ အမရယ်။ ဒီလိုပဲကြိုးစားပြီးအတင်းစီစဉ်လိုက်တော့လဲ သူ့ဟာသူဖြစ်သွားတာပါပဲ။ ဈေးဝယ်မထွက်ဘူးဆိုရင် သိပ်မကုန်ဘူး အမ။ Adora လိုလှတာလေးတွေမြင်ရင် စိတ်မထိန်းနိုင်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ သူများထပ်နဲနဲပိုကုန်တယ် ဟီး။
စုချစ် 15 September 2014 at 23:39
ညီမလေးရေ... ခရီးထွက်တာ ပြန်ရောက်လာပြီလား...
ဟောဒီမှာ သွားကြည့်ပြီး ရေးပေးဦးနော်...